St. Jakob Park, St. Jakob-Park - Basel
Eoropa Soisa Basle
Location: St. Jakobs-Strasse 395, 4052 Basel, Soisa
Phone: +41 61 375 10 10
Capacity: 38.512 olona
Fanokafana: 15 Martsa 2001.
Birao ara-javakanto: Herzog sy ny Moron
Aza mamitaka ny teny hoe "zaridaina" ao amin'ny latabatra, satria tsy momba azy. Ny St. Jakob Park no kianja filalaovan'ny klioba baolina Basel. Naverina tamin'ny taona 2001 izy io, indrindra fa tamin'ny lalao tamin'ny fifaninanana Eoropeana tamin'ny taona 2008. Tany amin'ny kianjan'i Yoggel no nipetrahan'ity toerana ity, saingy kely loatra ny zava-bitany noho ny hetsika goavana toy izany. Noho izany, nahazo fiainana faharoa izy, ka lasa kianja lehibe indrindra tao Basel ary niova ho St. St.
Ahoana no ahitantsika ny Park St. Jakob androany?
Androany ny habetsaky ny kianja dia toerana 40.000 eo ho eo. Manana endriny mitovy izy io eo an-kavanana. Ny tribunes dia miorina amin'ny lala-mitafo roa, ambonin'ireo tafo fisaka. Eo amin'ny andaniny roa dia misy mpitsidika lehibe roa izay amporisihana ireo fotoana tena mahafinaritra mandritra ny lalao.
Ny mahaliana, tsy misy sakana eo amin'ny sehatra lehibe ao amin'ny sehatra A sy ny kianja filalaovana, fa ny sehatra hafa misafidy sehatra dokambarotra. Misy ihany koa ny tranonkala, izay natao hanangonana zavatra maro sy kozatra, mba tsy hanelingelina ireo mpilalao eny an-kianja. Ary taorian'ny fikomiana sy ny ady tamin'ny taona 2006, voahodidin'ny fefy avo ny sehatra vahiny.
Eo akaikin'ny Kianjan'i St. Jacob any Basel, misy toeram-pivarotana goavana. Izy io dia misy trano fandraisam-peo marika malaza, fivarotana firavaka, trano fisakafoanana sy café maromaro. Ankoatra izany, dia afaka mahita ny iray amin'ireo tranombakoka mahaliana indrindra ao an-tanàna - ny tranombakoka an'ny klioban'ny baolina kitra "Basel". Ao amin'ny St. Jacob Park ao Soisa koa no misy ny fampisehoana, fety sy fety isan-karazany isan-taona.
Ireo mpankafy baolina kitra ity toerana ity dia tsaroan'ny zava-misy fa teo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Eoropa tamin'ny 2008 dia teo ny ekipan'ny ekipam-pirenena Rosiana nandresy ny ekipan'i Holandy tamin'ny 3: 0.
Ny zava-mahaliana iray hafa eo amin'ny tantaran'ny kianja dia ny toe-javatra izay nahafahan'ny mpikarakara nanova ny saha havanana nandritra ny lalao. Izany dia nitranga tamin'ny Jona 2008, nandritra ny lalao Switserland-Torkia, rehefa nipoaka ny lalao ny oram-batravatra mahery indrindra.
Ny kianja dia ny St. Jakob Park any amin'ny faritra atsinanan'i Basel, any amin'ny faritanin'i St. Alban. Mipoitra ny tambajotra an-dalambon'ny tanàna, noho izany dia afaka mandeha mora foana ianao amin'ny lamasinina mankany amin'ny fiantsonan'i Basel St. Jakob. Misy ihany koa bisy sy lalam-baravarana eo akaikin'ny kianja. Amin'ny fiantsonana bus Basel St. Jakob dia mitarika ny laharana faha-14 sy ny làlam-piantohana No. 36 sy 37. Ankoatra izany, ny kianja St. Jakob Park Stadium dia manakaiky ny làlambe lehibe E25, izay manan-danja iraisam-pirenena.
Museum Anatomical an'ny Oniversite Basel
Zaridaina Botanika ao amin'ny Oniversiten'i Basel
Zaridainan'ny tranombakoka sinoa
Ahoana no handraisana salady hena?
Ravina fanasana varavarankely
Ahoana no ahazoana mpanohana amin'ny orinasa?
Ahoana ny fisafidianana toeram-pisakafoanana ho an'ny kapila elektrika, elektrika na famokarana?
Ny atiny Lamb dia tsara sy ratsy
Harona an-kira sy savony
Tavoahangin-tsolon'ny saha ho an'ny volony
Fitrandrahana elektrika natsangana
Ny ravinkazo Burdock amin'ny fanaintainana amin'ny fiantrana
Ny gonarôzôs amin'ny lohalika - fitsaboana
Ny aretina amin'ny voromailala sy ny fitsaboana azy ireo
Vatana ho an'ny dihy
Psoriasis eny an-tanana
Inona avy ireo hozatra rehefa misintona?
Andro iraisam-pirenena handihy
Sakafo salmon misy menaka
Ny Grand Canyon ao Crimea - ahoana no ahatongavana any?
Manasitrana ny andriamani-bavy
Chris Hemsworth sy Elsa Pataki
Heidi Klum dia nanamafy fa niara-nisaraka tamin'i Vito Schnabel izy taorian'ny 3 taona
Tafita amin'ny ankizy 12 taona